बुढानिलकण्ठमा स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पूर्वपरिक्षण सिविर - Health Today Nepal
December 3rd, 2019 समाचार0comments
काठमाडौं, १७ मंसिर : बुढानिलकण्ठमा महिलाहरुकालागि स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पूर्वपरिक्षण सिविर सुरु भएको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजना तथा प्रिभेन्ट क्यान्सर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा उक्त सिविर मंगलबारदेखि सुरु भएको हो । बुढानिलकण्ठ स्वास्थ्य चौकीबाट सुरु भएको सिविर नगरपालिकाका बिभिन्न ६ स्थानमा संचालन भएर मंसिर २७ गते सम्पन्न हुने छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले मंगलबार बुढानिलकण्ठ स्वास्थ्य चौकीबाट उक्त सिविरको सुभारम्भ गरेका हुन । सिविर सुभारम्भका अवसरमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले उपचारको पहूचभन्दा बाहिर रहेका नगरवासीलाई उपचार सेवा र जनचेतना जगाउन सिविर सञ्चालन गरिएको बताए । ३० वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरका महिलाका लागि निशुल्क सिविर आयोजना गरिएको हो ।
क्यान्सर लाग्नु भन्दा पहिले नै परिक्षण गरेर थाहा पाउन सके स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न सकिने र उपचारले पूर्ण रुपमा निको गर्न सकिने भएकाले नगरपालिकाको सहकार्यमा परिक्षण सिविर आयोजना गरिएको प्रिभेन्ट क्यान्सर नेपालका निर्देशक डा. गजानन्द भण्डारीले बताए । सिविरमा ‘फस्ट ब्रेष्ट इक्जाम’ नामक आधुनिक उपकरणका माध्यमबाट स्तन क्यान्सरको परिक्षण भइरहेको डा. भण्डारीले जानकारी दिए । डा. भण्डारीका अनुसार यो उपकरणको माध्यमबाट परिक्षण गर्दा स्तनमा रहेको ३ एमएमसम्मको गाठो समेत पत्ता लाग्ने गर्छ । ५ वर्ष अगाडि नै क्यान्सर हुने खतरा देखाइदिने भएकाले यसको प्रचलन बढ्दो छ । पहिले स्तन क्यान्सरको परिक्षण मेमोग्रामका माध्यमबाट गरिन्थ्यो ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका जनस्वास्थ्य साखा प्रमुख कुमारप्रसाद दाहालले अपांग दिवसको अवसर पारेर परिक्षण सिविरको सभारम्भ गरिएको र यसबाट हजारौ महिला लाभान्वित हुने बताए । नगरपालिकाले यो अभियान सफल बनाउन एकसय २१ ज्ना महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई परिचालन गरेको छ । उनीहरुले परिक्षण सिविरमा चेक जाच गराउन आउने महिलालाई सहज बनाउनेछन । सिविरमा क्यान्सर विशेषज्ञ, चिकित्सक सहित नर्सहरुको टोलीले परिक्षण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
Previous article परिमल डेन्टल केयरको नवौं वार्षिकोत्सब
Next article मुख धुवाउछन् अनि फोक्सो कुहाउछन्